Nonstop Khabar, Author at A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news - Page 269 of 455
काठमाडौँ, २६ पुस । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सात वटा वडाका भित्री सडकमा माघ २ गतेदेखि चारपांग्रे सवारी साधन प्रवेश गर्न निषेध गर्ने भएको छ । कामपाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म भित्री सडकमा चारपांग्रे सवारी साधन गुड्न रोक लगाउन लागेको जानकारी दिएको हो । […]
२६ पुस २०७४, बुधबार २२:३८ January 10, 2018 Nonstop Khabar
हेटौँडा, २६ पुस । नारायणी यातायात पत्रकारीता पुरस्कारबाट आज मकवानपुरका ४ जना पत्रकार सम्मानित भएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको ठुलो संगठन नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३१ औं साधारणसभा समारोहमा पत्रकारहरुलाई सम्मान गरीएको हो । समारोहले भूगोल न्यूज डट्कमका तिलक अधिकारी, अन्नपुर्ण पोष्टका मकवानपुर जिल्ला संवाददाता कृष्ण सारु मगर, रेडियो नेपालका जिल्ला संवाददाता गणेश दर्पण अधिकारी र […]
काठमाडौँ, २६ पुस । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बाह्यस्वरुप परम्परागत ढाँचामा रहने गरी दरबार हाइस्कूलको पुनःनिर्माण यथाशीघ्र शुरु गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा आज बसेको एक बैठकले नेपाल र चीनबीच भएको समझादारीअनुसार परम्परागत ढाँचाबमोजिम नै दरबार हाइस्कूलको बाहिरी स्वरुप देखिने गरी पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो […]
काठमाडौं, २६ पुस । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएकाे छ । निर्वाचन अायाेगले अाज सातवटै प्रदेशमा मतदान गरिने राष्ट्रियसभा निर्वाचनकाे सम्पूर्ण तालिका सार्वजनिक गरेकाे हाे । सरकारले गरेकाे निर्णय वमाेजिम नै अायाेगले कार्यतालिका बनाएकाे हाे । यसअघि मन्त्रिपरिषदले माघ २४ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं […]
काठमाडौं, २६ पुस । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका डा. गाेविन्द केसी रिहा भएका छन् । उनलार्इ साधारण तारेखमा रिहा गर्दै सर्वाेच्च अदालत बरु अाफ्नै प्रधानन्यायाधिशमाथि डा. केसीले उठाएका प्रश्नबारे छानविन गर्न उनीसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट झिकाएकाे छ । पराजुलीकाे नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत झिकाएर त्यसबारे अध्ययन गर्न सर्वाेच्चले अादेश दिएकाे छ । […]
२६ पुस २०७४, बुधबार १४:३२ January 10, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २६ पुस । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा दुवै पार्टीका अध्यक्षले टुंगो लगाउने निर्णय गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा मंगलबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकले पार्टी एकताप्रति दुवै पार्टी दृढ रहेको र त्यसमा कुनै विवाद तथा असहमति नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै एकताका लागि थप गृहकार्यमा जुट्ने निर्णय […]
काठमाडौँ, २६ पुस । विभिन्न व्यक्तिको सवारी साधन भाडामा लिएर सोबापतको भाडा नबुझाउने दुई जाना उपक्राउ परेका छन् । सो घटनामा संलग्न काठमाडाै तारकेश्वरका शिवहरि कार्की र बालाजु माछापोखरीका दिनेश कार्की भन्ने दिनेश सार्कीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडाै पेप्सीकोलामा रहेको ‘रामभोले भेइकल सप्लायर्स’को नाममा उनीहरुले तीन विभिन्न व्यक्तिबाट प्रतिसवारी […]
२६ पुस २०७४, बुधबार ०९:५७ January 10, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २६ पुस । तपाईले सडक पेटीमा ठेलागाडामा राखिएका चटपटे र पानीपुरी खाने गर्नुभएको छ? छ भने सावधान रहनुहोला। किनकी त्यसमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने खालका हानिकारक तेलको प्रयोग गरेको पाइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो। विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको नेतृत्वमा मंगलबार […]
काठमाडाैं, २६ पुस । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कैलाली– २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले निवर्तमान भइसकेका सांसदलाई उक्त बजेट खर्च गर्न दिन नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । सरकारले यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार […]
Previous 1 … 268 269 270 … 455 Next